မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: ကြော်ငြာမို့ အော်ပါသဗျို့ ၊
ဒီပို့စ်မှာ ကရင်အမျိုးသားတွေထဲ စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေထဲက “ထူးစေး”
ရဲ့ ကြိုးပမ်းချက်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ။
သူ့ရဲ့ လပေါင်းများစွာ အားထုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ၊ ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ (စကော) “ကရင် - အင်္ဂလိပ်”
စကားပြော စာအုပ်ဟာ အောက်မှာပါတဲ့ပုံတွေအတိုင်း တွေ့ရနိုင်ပါတယ် ။ အခြေခံ အင်္ဂလိပ်စကား
ပြောအဆင့်ကို သေသေသပ်သပ် ကြိုးပမ်းပေါင်းစုချက်တွေနဲ့ လုပ်ကိုင်ထားရာမှာ A4 size စာအုပ်နဲ့
ထည့်စရာအိတ်/ဖိုင် ၊ native speakers တွေနဲ့ အသံသွင်းထားတဲ့ CD ချပ် ၊ ပလပ်စတစ်လောင်း
ထားတဲ့ A, B, C, D ကရင် - အင်္ဂလိပ် ရုပ်စုံစာရွက် ၊ ပလပ်စတစ်လောင်းထားတဲ့ ကရင်-အင်္ဂလိပ်
ပြက္ခဒိန် ၊ နိုင်ငံတကာမှတ်ပုံတင်နံပါတ် (ISBN) တွေပါတာကို တွေ့ရနိုင်ပါတယ် ။
ဒီစာအုပ်ဟာ အင်္ဂလိပ်စာ အခြေခံလုံးဝမရှိသူတွေကို အဓိက အထောက်အကူပြုသလို ၊ (စကော)
ကရင်စာကိုလည်း လေ့လာနိုင်ဖို့ အကူအညီရနိုင်ပါတယ် ။ အင်္ဂလိပ်စကားကို (စကော) ကရင်လို
အသံထွက်နိုင်ဖို့လည်း အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေနဲ့ ပေါင်းပြထားပါသေးတယ် ။
ပထမဦးဆုံး ကြိုးပမ်းချက် ၊ volume (1) ၊ ဖြစ်တာမို့လည်း အားနည်းချက်တွေ ရှိနေပေမယ့်
အထောက်အကူဖြစ်မယ့် နောက်ဆက်တွဲ volume အသစ်တွေ ထပ်ထွက်လာဖို့လည်း ကြိုးစားနေ
သြစတြေးလျမှာ ထုတ်လုပ်တာမို့ တန်ဖိုးက ဒေါ်လာ ၂၀ ကျသင့်ပြီး ၊ နိုင်ငံတကာကို စာတိုက်
ကနေ ပို့စေချင်ရင်တော့ ၊ အပိုဆောင်း ၇ ဒေါ်လာ ထပ်ပြီးကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ စိတ်ဝင်စားသူ
တွေအနေနဲ့ သူ့ရဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (Link) ထဲဝင်ရောက်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ် ။ (ကျနော့်ဆီမှာရင် ကူညီ
နိုင်ပေမယ့် သူ့ဆီကိုတိုက်ရိုက်မှာဖို့တော့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်) ။
ဒါ့ပြင် ဒီစာအုပ်ကိုဖန်တီးတဲ့ “ထူးစေး” ဟာ ၊ အနာဂါတ်မှာ စိတ်ရဲ့အစာတွေအဖြစ် အထောက်
အကူပြုပေးနိုင်မယ့် စာအုပ်မျိုးတွေကိုလည်း စုစည်းထုတ်ဝေသွားနိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားတယ်လို့ သိရ
ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ သူ့ရဲ့အခြားဝက်ဘ်ဆိုဒ် (Link) ထဲမှာ နီးစပ်သက်ဆိုင်တဲ့ စာအ
ချို့ကို သွားဖတ်ကြည့်နိုင်ကြပါတယ် ။ အောင်မြင်ကြီးပွား တိုးတက်ချင်တဲ့စိတ်ကို ကိုယ့်ရဲ့ ဝါသနာ
ပါတဲ့ ၊ ကိုယ့်စိတ်ဆန္ဒနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့လမ်းမျိုးနဲ့ ပေါင်းစပ်လုပ် ကိုင်လိုသူတွေအနေနဲ့ ထူးစေးလိုလူ
တွေနဲ့ ကွန်ယက်ဖွဲ့ ၊ အတုယူကြိုးစားသွားနိုင်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ် ။
(ISBN ပါ နောက်မျက်နှာဖုံး)
အောက်မှာကတော့ မဲလခိုလှုံရာစခန်းရဲ့ (ပိုး) ကရင်ယဉ်ကျေးမှုရုံး (PKLCC) ကထုတ်တဲ့ ပြက္ခဒိန်
ဖြစ်ပါတယ် ။ အရင်နှစ် မကုန်ခင်ကတည်းက ထုတ်ခဲ့ပေမယ့် ခုမှလူကြုံကောင်းနဲ့ ရောက်လာခဲ့တာမို့
အမှတ်တရ တင်ထားလိုက်ပါတယ် ။
ဒီပြက္ခဒိန်မျိုးကို နှစ်စဉ်ထုတ်ဝေဖို့ဆန္ဒရှိပေမယ့် ရံပုံငွေအခက်အခဲကြောင့် ရှိတဲ့ကွန်ပြူတာအစုတ်
ကလေးသုံးပြီး အခမဲ့လုပ်အားပေးသူအချို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့နှစ်တွေမှာ ဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့ပါ
တယ် ။ ဒီနှစ်အတွက်တော့ ကံကောင်းထောက်မစွာ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပိစိ
ကွေးလေး ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လို့ ဝမ်းသာပါတယ် ။
ဒီပြက္ခဒိန်ကို ထုတ်ဝေနိုင်ဖို့ ကမကထလုပ်ခဲ့သူများဟာ မဲလခိုလှုံရာစခန်းအတွင်း (အချို့ကနေ
ဘုန်းကြီးကျောင်းစာလို့ခေါ်တဲ့ ပိုး) ကရင်စာပေကို ကျောင်းတွေမှာ လေးတန်းအထိသင်ကြားပေးနိုင်
ဖို့ ၊ နွေရာသီ ဆရာဖြစ်သင်တန်းများ ၊ ကရင့်တူရိယာ သင်ကြားမှုတွေအပါအဝင် စာပေနဲ့ယဉ်ကျေး
မှုပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ၊ ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး
လုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် ။ နောင်ကိုလည်း ခေတ်နဲ့အညီ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ မူလတန်းကရင်ပြ
ဌာန်းစာအုပ် ၊ ပုံပြင်နဲ့ ရုပ်ပြစာအုပ်တွေကိုလည်း ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ရှိပါတယ် ။ ကူ
ညီမှုတွေ အချို့နေရာတွေမှာ ရနေပေမယ့် လုံလောက်တယ်တော့ မရှိပါဘူး ။
အနာဂါတ်ကတော့ မှောင်နေဆဲပါ ။
ကြယ်လေးတွေနဲ့ ပိုးစုန်းကြူးလေးတွေ ပြန်လာဆုံတဲ့တစ်နေ့တော့ နေရောင်မရှိလည်း လင်းလာ
၀၇၊ ၀၆၊ ၂၀၁၁
Posted by မန်းကိုကို at 6/07/2011
အဓိပ္ပါယ်နှစ်ခွ သုံးခွတွေနဲ့ မရေးတော့ပါဘူးကွာ။
အထင်မှား အမြင်မှားစရာတွေ ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ဘူးလား။
အခုကြော်ငြာထားတဲ့ထူးစေးရဲ့ စာအုပ်နဲ့ခွေတွေကို ဘယ်လိုရယူနိုင်မလဲ.
မန်းကိုကို June 7, 2011 at 10:00 PM
မသိဘူးလေ ၊ ၈၈ အရေးအခင်းကို “မင်းမဲ့တိုင်းပြည်လို ချောက်ထဲကျဖို့ လက်တစ်လုံးအလို” ဆိုတဲ့ အသုံးနှုန်းမျိုးက ပြည်မက ဆေးမှီဖို့ သိပ်မလွယ်တော့တဲ့သူတွေ သုံးတတ်တာမျိုးမို့ ဇဝေဇဝါ နည်းနည်းဖြစ်သွားတာပေါ့ ။ နောက်ပိုင်း စာတွေကျပြန်တော့လည်း ခန့်မှန်းရခက်တော့ မယုတ်မလွန် ပြန်ပြောရတာပါပဲ ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ၊ ဗမာစာကို ကိုယ့်ပင်မစာပေအဖြစ် သုံးသူတွေတောင် လိုရင်းအဓိပ္ပါယ် လွဲချော်တာတွေ ဖြစ်တတ်တာမို့ အပြစ်တော့လည်း မဟုတ်ပါဘူး ။
ထူးစေးကို ဆက်သွယ်ချင်ရင် သူ့ဝက်ဘ်ဆိုဒ် http://www.englishkaren.com/ ထဲမှာ သွားကြည့်လို့ ရပါတယ် ။ ငွေချေဖို့လည်း အင်တာနက်ထဲက ပေးလို့ရပါတယ် ။ ပေးဖို့အခက်အခဲရှိရင် (ပေးမတတ်ရင်) မေးကြည့်ပြီး ညှိနှိုင်းလို့ ရမှာပါ ။ (ဥပမာ ဘဏ်ထဲ ငွေလှမ်းလွဲပေးပြီး ငွေရောက်တာနဲ့ စာအုပ်ပို့ပေးတာမျိုးပေါ့၊) ။
သူ့ e-mail က “adam@englishkaren.com” ပါ ။
( “htoosay@yahoo.com” ကိုလည်း ဆက်သွယ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်) ။
စာပို့လိပ်စာက “P. O. Box 2259, Werribee, VIC 3030, Australia” ပါ ။
ဖက်စ်ပို့ချင်ရင်တော့ “Fax - (61) 0387423341” နဲ့ပို့ပေးလို့ ရပါတယ် ။
Nge Naing June 8, 2011 at 12:37 AM
ကိုမန်းကိုကိုရေ အတော်ပဲ၊ ကျွန်မလည်း ဟိုတုန်းက မတတ်တခေါက် ရခဲ့ဖူးတဲ့ ကရင်လိုတွေ အခု မေ့နေတာနဲ့ ပြန်နွေးလို့ရအောင် အော်စီမှာဆိုတော့ နီးနီးနားနား အားပေးလိုက်ဦးမယ်။ ပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်မှာလည်း ကရင်ရွာသားတွေကို မြန်မာ့တပ်မတော်က ရက်ရက်စက်စက် သတ်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ပါတဲ့ပို့စ်တခု တင်ထားပါတယ်။
မန်းကိုကို June 8, 2011 at 10:29 PM
ကျနော်လည်း အဆင့်မီဖြစ်အောင် ကြိုးစားထားတဲ့ အရာလေးတစ်ခုကို လူပိုသိလာအောင်ရယ်လို့ပါ မငယ်နိုင် ။ စာအုပ်မှာ အားနည်းချက်လေးတွေ ရှိတာကိုလည်း ထပ်ပြီး စကားပလ္လင် ထပ်ခံထားချင်ပါတယ် ။
ပို့စ်မှာ တင်ထားတဲ့ပုံတွေကို သွားကြည့်ပြီးသွားပါပြီ ။
ကျနော်လည်း အဲဒီလိုပုံတွေကိုတင်ဖို့ ခုထိ ချီတုံချတုံ ဒွိဟဖြစ်နေတုန်းပါ ။
တစ်ဖက်က အနိဋ္ဌာရုံပုံတွေကိုတင်ပြီး စာဖတ်သူတွေကို စိတ်မသက်မသာ မဖြစ်စေချင်ဘူး ။
တစ်ဖက်ကတခါ မသိသေးသူတွေ ၊ ဒီလောက်အထိ ဆိုးရွားမယ် မထင်သူတွေ ၊ မယုံကြည်သူတွေ ၊ ဇွတ်မှိတ်ငြင်းချင်သူတွေ ရှိနေပြန်တော့ တင်သင့်တယ်လို့ အဖြေက ထွက်နေပြန်ပါတယ် ။
နောင်မှပဲ ပုံနဲ့ရေးစရာတွေကို အချိန်ယူ ရွေးချယ်ပြီး ၊ သင့်တော်တဲ့ ပို့စ်မျိုးလေး တစ်ပုဒ်လောက် ရေးဖို့ကြိုးစားပါဦးမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါတယ် ။
htoosay June 11, 2011 at 6:56 PM